श्रीमती ‘पर सरेकी’ छिन् – Complete Nepali News Portal
छोरीलाई यही वर्ष स्कुलमा पहिलोपटक महिनावारी भएछ । स्कुलवाट फोन गरिन् । मसंग छोरी सकेसम्म नेपालीमा वोल्ने प्रयास गर्छिन । भनिन् – ‘वावा खुन आयो’ । म झोलामा उनका कपडा र ‘सेनेटरी सप्लाइज’ वोकेर स्कुल दौडिए । आजकल पनि कहिलेकांही ‘सेनेटरी सप्लाइज’ हाल्न विर्सन्छिन् र स्कुल दौडिरहनुपर्छ । छोरीको स्कुल चलिरहेको वेला मैले स्कुलको घण्टी वजाए भने फ्रन्ट डेस्कका कर्मचारीले वुझिहाल्छन् – यात छोरीको कुनै अप्वाइन्मेट छ या त ‘सेनेटरी सप्लाइज’ लान विर्सिएकोले म वोकेर पुगेको छु ।
अमेरिका दिनदिनै त्रासदीपूर्ण वाटोमा अगाडि वढेको छ । कोरोना भाइरसवाट संक्रमित हुनेहरुको सवैभन्दा अग्रसुचिमा अहिले अमिरिका छ । धेरै अस्पताल अगाडि आजकल शववाहनको लस्कर देख्न सकिन्छ । संक्रमणको आशंका भएकाहरु त १४ दिने क्वारेन्टाइन सकेर नियमित जीन्दगीमा फर्कन्छन् । तर विरामीको सेवामा भएका स्वास्थकर्मीहरुको यो ‘सेल्फ आइसोलेसन’ कहिले सकिएला ? चिकित्सकहरुलाई मेरो कार्यक्षेत्र सुरक्षित भन्ने कहिले महसुस होला ? मेरी पत्नी ‘पर’ वाट कहिले ‘वर’ आउन पाउलिन् ? – साभार : इनेप्लिज